Izay mpanonta 3D indostrialy hividy | fitaovana maimaim-poana
Inona no mpanonta 3D indostrialy hividianana
Isaac | | Fanontana 3D
La fanamboarana aditif lasa iray amin'ireo loharanon-karena be fanantenana indrindra eo amin'ny sehatry ny indostria. Ity karazana famokarana ity dia afaka mahatratra kojakoja manana toetra izay tsy ho vita raha tsy izany, lafo loatra, na sarotra ny mamorona. Noho izany, miha ilaina ny manana mpanonta 3D indostrialy amin'ny sehatra sasany. Raha jerena ny tombony sy ny fifaninanana izay mety hahatonga anao handresy, dia tsy fandaniam-bola izany, fa fampiasam-bola lehibe izay mihoatra noho ny tambin-karama.
QIDI TECH X-Plus... Jereo ny fiasa Jereo tolotra
ENET 59Ncm Nema 17 Motor... Jereo ny fiasa Jereo tolotra
Mpanonta printy 3D lehibe... Jereo ny fiasa Jereo tolotra
Mpanonta printy 3D Flashforge... Jereo ny fiasa Jereo tolotra
Ny tsara indrindra	QIDI TECH X-Plus...
Kalitaon'ny vidiny	ENET 59Ncm Nema 17 Motor...
Ny ankafizinay	Mpanonta printy 3D lehibe...
Mpanonta printy 3D Flashforge...
Jereo ny fiasa
1 Ny mpanonta 12D indostrialy 3 tsara indrindra
1.7 XYZprinting Da Vinci loko
1.8 FlashForge Inventor
1.9 Bresser T-Rex
1.10 FlashForge Mpamorona 4
1.13 Mpanonta printy indostrialy hafa
2 Toromarika mividy
3 Fampahalalana misimisy kokoa
Ny mpanonta 12D indostrialy 3 tsara indrindra
Raha manana orinasa ianao ary mila mividy mpanonta 3D indostrialy, eto ianao 12 amin'ireo modely tsara indrindra azonao jerena, miaraka amin'ny toetra samihafa sy ny vidin'ny vidiny:
FlashForge dia iray amin'ireo milina tsara indrindra amin'ny sehatra, misy tsipika miompana manokana amin'ny fampiasana indostrialy, toa an'i Guider IIS na 2S. Tonga miaraka amin'ny fakan-tsary ho fanaraha-maso lavitra, écran misy sivana, écran touchée 5 mirefy, system detection filament lany, volume printy 28x25x30 sm, rafitra fanontana indray raha sendra tsy fahombiazana, sns. Toy izany koa, azonao atao ny mampiasa PLA, ABS, Flex filaments, conductive filament, sns.
Amin'ny alàlan'ny rahona dia ho afaka hifehy ity mpanonta 3D ity ianao, ankoatra ny fahitana ny asa ataonao amin'ny alàlan'ny fakantsary. Azo antoka izy io, satria misy mpankafy misy sivana mba hisorohana ny vovoka azo amboarina mandritra ny fanontana. Ary azo ampifandraisina amin'ny alalan'ny tariby USB izany, ary koa manohana ny fanontana avy amin'ny a USB flash drive, ary fifandraisana tambajotra WiFi. Ny marina dia ± 0.2mm, ary manana hafainganam-pandeha tsara izy io.
Ity modely manaraka ity dia avy amin'ny CreatBot, orinasa mpanamboatra additive malaza iray hafa ary manana vidiny tena mahaliana. Ity mpanonta ity dia afaka miasa amin'ny filament mandroso toy ny PEEK sy ny fampisehoana avo lenta hafa izay mitaky hafanana extrusion avo (hatramin'ny 420ºC). Azonao atao koa ny manonta amin'ny PC, nylon, PP, ABS, sns.
Manana rafitra izy io avereno indray raha sendra tsy fahampian'ny herinaratra, double extrusion nozzle, ary koa ny automatique leveling sy fanitsiana, sns. Masinina mahafinaritra amin'ny famokarana injeniera, fikarakarana ara-pahasalamana, fiara, na aerospace indostrialy. Miaraka amin'ny fahafahana manamboatra ampahany lehibe.
JFF 3D mpanonta,...
JFF koa dia manana modely indostrialy. Izy io dia fanontam-pirinty avo lenta, afaka pirinty hatramin'ny 30 × 22.5 × 38 cm. Mangina izy io, manana hafainganam-pandeha tsara ary tena mazava tsara. Izy io koa dia noforonina mba hitazonana azy ho mafy orina sy matanjaka, miaraka amin'ny famolavolana kalitao, ary mba hisorohana ny fihovitrovitra tsy hisy fiantraikany amin'ny fizotrany.
Miaraka amin'ny sehatra fitaratra silisiôna karbônina, afaka mamokatra sosona 0.1 mm, rafitra fanapotehana avo lenta, mpankafy mahery vaika, interface tsara mpampiasa amin'ny efijery fikasihana 4.3″, mahomby izy io, ary mifototra amin'ny FDM teknolojia hanonta amin'ny PLA sy ABS. Izy io koa dia manohana ny fanontana an-tserasera na avy amin'ny karatra SD, amin'ny endrika STL, OBJ ary AMF. Mifanaraka amin'ny Creality Slicer, Cura, Rpetier, ary Simplify3D, ary koa Windows, macOS ary Linux.
Mpanonta printy Kloner3D 140...
Kloner3D koa dia manana ity mpanonta mahafinaritra azonao ampiasaina ity Linux, Windows ary macOS rafitra fandidiana, miaraka amin'ny fanohanana ny rakitra misy modely 3D amin'ny G-code, OBJ ary STL. Izy io dia matevina sy maivana, ary mifototra amin'ny teknolojia FFF hanamboarana kojakoja hatramin'ny 14x13x12 sm, miaraka amin'ny hatevin'ny sosona 0.05 mm fotsiny, ary XYZ fanapahan-kevitra 0.01 mm.
Manaiky filamenta 1.75mm, miaraka amin'ny nozzle extruder tokana 0.5mm. afaka manonta amin'ny fitaovana tena isan-karazanytoy ny PLA, ABS, PCABS, NYLON, PET-G, PVA, PET, TPE, TPU, HIPS, Laywood, Architectural, Carbonium, PMMA, ASA ary Laybrick, PLA, ABS, PVA, PET, TPE, TPU, Laywood ary Laybrick.
QIDI TECH i Fast...
Ity mpanonta 3D indostrialy ity, araka ny anarany, dia miavaka amin'ny hafainganam-pandehany. Mampiasa axe Z roa izy io mba hanatsarana ny vokatra, hahatratra hafainganam-pandeha hatramin'ny 100cm3/h, vita malefaka, ary teknolojia FDM hiatrehana ny fitaovana toy ny PLA, PLA +, ABS, PET-G, nylon, PVA (tsy mety levona anaty rano), sns.
Mikasika ny haben'ny fanontana dia ahafahanao mamorona ampahany hatramin'ny 33x25x32 cm, ary manana rafitra fanafanana mari-pana ambony. Fanampin'izany, manana curve fianarana haingana izy, satria manana interface interface tsotra sy sariaka izy. Miaraka amin'ny fomba roa hofidiana: maody mahazatra sy maodely manam-pahaizana.
FlashForge hafa izay miditra amin'ity lisitry ny mpanonta 3D indostrialy tsara indrindra ity. Miaraka amin'ny rafitra mari-pana ambony, fanamafisam-peo manampy, sensor filament lany, mounts marani-tsaina, ecran touchy 5″ misy interface tsara ho an'ny mpampiasa, natao ho an'ny asa mangina, ary kalitao tsara.
Raha ny sisa amin'ny endri-javatra, dia mety hahatratra 240ºC amin'ny extruder, ary 120ºC eo am-pandriana, mety amin'ny PLA, ABS, TPU, ary PET-G filaments, miaraka amin'ny boky printy 28x25x30 sm, famaha ny ±0.2 MG, fitahirizana anatiny 8GB, fifandraisana USB, WiFi, Ethernet, ary fanontana avy amin'ny SD. Ahitana rindrambaiko FlashPrint sy FlashCloud ary PolarCloud.
XYZprinting Da Vinci loko
Fanontam-pirinty XYZ da Vinci...
XYZprinting da Vinci Color dia mpanonta printy 3D zavatra manokana. Ity fitaovana ity dia afaka miasa amin'ny fitaovana toy ny PET-G, PLA, sns. Ny hatevin'ny sosona dia 0.1mm mba hahazoana vokatra malefaka sy tsara. Ny nozzle dia 0.4 mm, ary manaiky filaments 1.75mm.
Izy io dia manana efijery LCD 5″, mifanaraka amin'ny rafitra fiasa Windows, ary rafitra fanontana loko samihafa.
Flashforge Mpamorona -...
Safidy iray hafa, avy amin'ny FlashForge ihany koa, dia ity modely Inventor ity. Tena mora izany, ho an'ny asa an-telefaonina na filaharana misy studio kely. Ity mpanonta ity dia manohana filamenta 1.75mm, miaraka amin'ny fitaovana toy ny ABS, PLA, PVA, sns. Ny vokatra dia tena tsara sy mazava tsara, miaraka amin'ny extruder roa, ary afaka mamorona modely hatramin'ny 22x15x15 cm.
Includes one Ecran fikasihana mora ampiasaina, ary webcam mitambatra mba hanoratra horonan-tsary momba ny dingana na fanaraha-maso an-tserasera. Izy io koa dia mamela ny fanaovana pirinty avy amin'ny karatra fitadidiana SD izay anananao modely, mifandray amin'ny alàlan'ny USB, ary afaka miasa amin'ny tambajotra noho ny WiFi.
Bresser T-Rex - Mpanonta...
Ny orinasa alemà Bresser koa dia namorona iray amin'ireo mpanonta printy indostrialy tsara indrindra. Miorina amin'ny teknolojia FFF roa extruder, ary nanatsara ny fampangatsiahana, ny fanamafisam-peo mora, ny fanitsiana ny efitrano fanerena, ny efijery LCD 8.9 sm miaraka amin'ny interface haingana sy mora, ny fifandraisana WiFi, sns.
Afaka mandefitra 1.75mm PLA sy ABS karazana filaments, afaka mamorona modely hatramin'ny 22.7 × 14.8 × 15 sm. Mafy sy mateza ny firafiny, manana fanontam-pirinty marina 0,1-0,2 mm, USB fifandraisana, SD karatra slot, spatula fiantraikany sy 2 kilao ny filaments ho fanomezana, manana sosona hatevin'ny eo anelanelan'ny 0.05 sy 0.5 mm, 0.4 mm nozzle, tena marina famaky ary manohana REXPrint rindrambaiko sy STL rakitra.
FlashForge Mpamorona 4
Vidio ny FFCreator 4
Ny FlashForge Creator 4 dia iray amin'ireo mpanonta tsara indrindra ho an'ny fampiasana matihanina. Miaraka amin'ny fahafahana manonta amin'ny hafainganam-pandeha avo sy ny fahamarinan'ny ± 0,2mm na 0.002mm / mm, boky fananganana lehibe hatramin'ny 40x35x50cm, haavon'ny sosona: 0.025-0,4mm, hafainganana fanontana: 10-200mm/s araka ny fanitsiana, karazana fiara mivantana tsy miankina roa. extrusion INDEX rafitra, 0.4mm nozzle (koa manaiky 0.6 sy 0.8mm).
Izy io dia manohana karazana rakitra maro, toy ny 3MF, STL, OBJ, FPP, BMP, PNG, JPG, ary koa ny rindrambaiko FlashPrint, ary manana efijery 7-inch lehibe. Ny fifandraisana dia amin'ny alalan'ny USB, na tariby Ethernet na WiFi ho an'ny tambajotra. Ny fitaovana ekena dia TPU, PLA, PVA, PETG, 98A TPU, ABS, PP, PA,
PC, PA12-CF, ary PET-CF.
Vidio ny Totus Tech DLP
Ity manaraka ity dia avy amin'ny Jiangsu Totus Technology Company, orinasa sinoa izay niditra tao amin'ny indostrian'ny fanontam-pirinty 3D miaraka amin'ny mpanjifa afa-po bebe kokoa. Ity mpanonta ity dia manana DLP teknolojia, ary mamela ny asa amin'ny sehatra toy ny firavaka, ny famokarana kilalao, ny mpitsabo nify, ary ny sehatra indostrialy hafa izay mitaky fitaovana manokana, ary avo lenta sy mazava tsara. Manonta amin'ny hafainganam-pandeha ambony izy io, ary natao haharitra.
Vidio ny Uniz Slash
Manana safidy amin'ity Uniz Slash ity koa ianao, mpanonta printy 3D indostrialy lehibe hafa miaraka amin'ny teknolojia STL LCD, hamorona zavatra hatramin'ny 19.2x12x40 cm, avo dia avo. mazava tsara amin'ny fiovaovan'ny microns vitsivitsy, hatevin'ny sosona tena manify, hafainganam-pandeha hatramin'ny 200 mm/h, rafitra fanamafisam-peo mandeha ho azy, fitaovana kalitao sy mateza, ary fifandraisana USB, WiFi ary Ethernet.
Izy io koa dia mamela ny fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny fampiharana ho an'ny fitaovana finday iOS/iPadOS sy Android. Mazava ho azy fa mifanaraka amin'ny Windows sy macOS izy io, ary manohana ny endrika STL, OBJ, AMF, 3MF, SLC ary UNIZ. Ankoatra izany, dia manohana modely tena mavesatra, mihoatra ny 1 GB ny habeny.
Mpanonta printy indostrialy hafa
Ankoatra ireo voalaza etsy ambony ireo dia misy ihany koa ireo mpanonta printy 3D indostrialy hafa afaka mandeha manomboka amin'ny 10.000 ka hatramin'ny 100.000 € amin'ny tranga sasany. Ireo karazana mpanonta ireo dia natao ho an'ny orinasa lehibe kokoa na manana filana manokana. Na izany aza, tsy amidy amin'ny fivarotana izy ireo, fa tsy maintsy mifandray amin'ny serivisy varotra, mpamatsy ao amin'ny faritra, na solontenan'ny varotra.
Ny sasany ireo atolotra amin'ity karazana ity dia:
Additec µPrinter: milina indostrialy fanontana ampahany 3D amin'ny metaly. Mampiasa teknolojia DED (Directed Energy Deposition) na LMD (Laser Metal Deposition) izy io. Mampiasa filamenta metaly na tariby avy amin'ny 0.6 ka hatramin'ny 1 mm ny savaivony ary afaka mampiasa vovoka metaly koa izy raha tiana. Izy io dia manana laser triple amin'ny 200W tsirairay, ary mba hahazoana vokatra tsara indrindra, dia manana rafitra mari-pana mitantana mavitrika. Ny fakantsarin'izy io dia ahafahan'ny fanaraha-maso lavitra ny fizotran'ny famokarana na ny firaketana ny fahataperan'ny fotoana.
Triditive AMCELL: orinasa Espaniola, miorina ao Asturias, ary nametraka ny tenany ho anisan'ny tsara indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny resaka mpanonta printy 3D indostrialy. Masinina feno, mazava tsara, ary tena ampy fitaovana amin'ny lafiny fiasa sy teknolojia. Ho fanampin'izany, dia afaka manonta amin'ny fitaovana maro be ianao, avy amin'ny polymers toy ny ABS, ASA, CPE, HIPS, IGLIDUR I150, na dia composite toy ny PA+ARAMID, PA+CF, PC+ABS, PC+PBT, ary koa metaly toy ny vy SS 316 sy SS 17-4 PH, Inconel (Ni-Cr), ary Titanium.
HP MultiJet Fusion: Mazava ho azy fa manana mpanonta printy 3D ho an'ny sehatry ny fandraharahana ihany koa ny mpanamboatra amerikanina HP, toy ny milina fanamboarana additive miaraka amin'ny teknolojia MJF. Ankoatr'izay, mba hahazoana vokatra tsara indrindra, dia ahafahanao mifehy ny voxel tsirairay.
Horohorontany EVEMET 200: Ity orinasa italiana ity dia nahavita namolavola fitaovana fanontam-pirinty 3D lehibe indostrialy mifototra amin'ny teknolojia laser, ho an'ny fanamboarana zavatra maro, anisan'izany ny firavaka vita pirinty, na ho an'ny sehatry ny fahasalamana nify. Raha ny modely EVEMET 200, dia mamela ny fanaovana pirinty amin'ny fitaovana metaly toy ny alloy aluminium, Co-Cr, nickel alloys, vy, titane ary koa metaly sarobidy (volamena, volafotsy, platinum).
Xerox ElemX: mpanonta vy ranon-javatra indostrialy. Iray amin'ireo milina lehibe misy fampiharana koa amin'ny sehatra hafa toy ny fanafody, aeronautika ary aerospace, miaramila, sns. Amin'ity tranga ity, mamela anao hamorona sombin-javatra sasany amin'ny alloy aluminium tena maivana.
Raha mbola misalasala ianao hoe iza no hofidiana amin'ny lisitra etsy ambony dia manoro hevitra anao aho hamaky ny torolàlana momba ny Ahoana ny fisafidianana mpanonta 3d indostrialy. Hanafoana ny fisalasalana maro izany ary ho afaka hisafidy izay mety amin'ny orinasa ianao.
Mpanonta printy 3D resin tsara indrindra
Kojakoja mpanonta printy 3D
Filaments sy resin ho an'ny mpanonta 3D
Mpanonta printy 3D tsara indrindra ho an'ny trano
Mpanonta printy 3D mora indrindra
Ahoana ny fisafidianana ny mpanonta 3D tsara indrindra
Momba ny endrika fanontana STL sy 3D rehetra
Karazana mpanonta 3D
Torolàlana fanombohana fanontana 3D
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fanontana 3D » Inona no mpanonta 3D indostrialy hividianana
Fritzing: lozisialy ho an'ny mpanamboatra sy elektronika (sy ny hafa)
Inona no mpanonta 3D hovidiana ho an'ny trano
Fitsapana anglisyTest Catalanquiz espaniola